Pyae Phyo (MMiTD): November 2014
Huawei G740ကိုလွယ်လွယ်ကူကူRootဖောက်ကြမယ်(only apk)
ဒီနေ့ တော့ဦးအာကာHuawei G740 အမျိုးအစားကိုRootလုပ်နည်းတင်ပေးမှာပါ
ဒီနည်းနဲ့ တခြား Huawei ဖုန်းတွေကိုစမ်းကြည့်တာလဲအောင်မြင်စွာရခဲ့ ပါတယ်
ဒါပေမယ့် Huawei G740ကို Rootလုပ်နည်းပဲပြောပြမှာပါ သင့်ညဏ်ရှိမယ်ဆို တခြားဖုန်းများကိုစမ်းသပ်ပြီး
Settings ထဲကိုသွားပါDeveloper optionsကိုဝင်ပါUSB debugging checkမှာအမှန်ခြစ်လိုက်ပါ။
သတိ- Settings ထဲမှာDeveloper optionsမတွေ့ ပါက
about deviceကိုဝင်ပါ Android versionပေါ်ကိုလက်ဖြင့် ၇ချက်နှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆို
Developer optionsပေါ်ပါလိမ့် မယ်
အရင်ဆုံး Framaroot.apk ကို dowယူပါ
Dowလိုရတဲ့Framaroot.apkကိုသွင်းပါ
Success;,)Superuser and su binary installed ,you have to reboot your device
အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ supersu apkလေးရသွားရင် Rootလုပ်တာအောင်မြင်သွားပါပြီး
ပြီးရင် Font Changer လေးနဲ့ပြောင်းပေးလိုက်ပါ 4,3အထိလက်ခံပါတယ်
Zawgyi Font Changer.apk
ဦးအာကာDOWNLOAD LINK အတိုင်းပဲထားပေးပါ
ပြန်ပြီး adf.ly LINKထည်ပြီး ပြန်လှန်မမျှဝေပေးပါနဲ့ 
လေးစားမှု နဲ့ နားခံပေးကြပါလိုတောင်းဆိုပါတယ်
Posted by ဦးအာကာ -ဦးလေးကြီး No comments :
အမျိုးအစား: Android root
♪ Zombie Sniper (FPS) Apk v1.0.1 ♫
သရဲ Game လေးမတင်ပေးရတာကြာလို့ Zombie Sniper (FPS) ဆိုတဲ့သရဲဂိမ်းလေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ ဗိုင်းရက်စ်ပိုးတစ်ခုကြောင့် တစ်မြို့လုံးသရဲတွေဖြစ်သွားပြီး မြို့ထဲက လမ်းတွေ အိမ်တွေအားလုံး ထဲမှာ ရှိတဲ့သရဲတွေကို သေနတ်နဲ့လိုက်ပြီးပစ်ခက်နှိမ်နင်းရတဲ့ Game တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ သရဲတွေ နဲ့သွးစုတ်ဖုတ်ကောင်တွေကို အဝေးကနေပြီးစနိုက်ဘာနဲ့တိုက်ခိုက်ရတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ ။တစ်မြို့လုံးရှိသမျှ လူတွေကသွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ မိမိတတ်နိုင်သလောက်ရှင်းပေးတဲ့ဇာတ်သွားလေး နဲ့ ကစားလို့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးပါပဲ ။ ဇတ်လမ်းသွားဖြစ်ပြီးအဆင့်တွေအများကြီးနဲ့ကစားသွားရမှာဖြစ် ပါတယ်ဗျာ။ HD ဂိမ်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက် ရုပ်သံကြည်လင်မူက အထူးပြောစရာ မလိုအောင်ကောင်းမွန်ပါ တယ်။ Android OS 2.3.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
The Other Woman(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
ညှို့အားပြင်း မင်းသမီး ကင်မရွန်းဒီယာ့ဇ် (Cameron Diaz) ၊ နှုတ်ခမ်းဖျားကမှဲ့လေးနဲ့ ချစ်စဖွယ်ဆွဲဆောင်နိုင်သော အလှပိုင်ရှင် Vogue Model ကိတ်အပ်(ပ)တန် (Kate Upton) တို့နဲ့အတူ
17 Again, This is 40 စတဲ့ဇာတ်လမ်းများမှ နံမည်ကြီး မင်းသမီး လက်(ဇ)လီမန်း (Leslie Mann) တို့ပါဝင်သော The Other Woman က PG-13 အဆင့် ဟာသနှောတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးပညာပေး
ထက်မြက်ပြီးချောမောလှတဲ့ Carly , ရိုးအတဲ့ဇနီးချော Kate ,
ခပ်ချောချောကောင်မလေး Amber တို့ သုံးယောက်က
လူရှုပ်လူပွေ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Kate ရဲ့ ခင်ပွန်း Mark နဲ့ တပြိုင်တည်း ပတ်သတ်မိကြပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးသာမက စီးပွားရေးလောကမှာပါ လိမ်လည်ကောက်ကျစ်တဲ့ Mark ကို ဂလဲ့စားချေဖို့
အဲ့ဒီ အမျိုးသမီး ၃ယောက်ပူးပေါင်းသွားတဲ့အခါ သူတို့ အကွက်ချပြီး ကြိုးစားမှုတွေ အောင်မြင်ပါ့မလား...
မကောင်းတဲ့ဗီဇကြောင့် မိန်းမမရှုပ်ရရင်မနေနိုင်တဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက် နဲ့ပတ်သတ်ပြီး
ကိုယ်ချင်းစာမှုတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ သူတို့ ၃ယောက်ရဲ့ခင်မင်မှုကရော ကြာရှည်တည်မြဲပါ့မလား..
ကိုယ်တိုင်ပဲ ခံစား ကြည့်ရှုကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
အဲ့ဒီ ရုပ်ရှင်မှာ Bonus အနေနဲ့ ရပ်(ပ်) အဆိုတော် Nicki Minaj ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုများကိုပါ ကြည့်ရမှာပါ။
(ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို mmmovieguide မှကူးယူဖော်ပြပါသည်...)
Connection မကောင်းသူများအတွက် Small File Size(276MB)ကိုပါတင်ဆက်ထားပါတယ်။
Quality....Blu-ray Rip 480p
Download and Watch(pCloud Link)
Download and Watch(pCloud Link)Small File Size(276MB)
​ပြောင်းလည်း​ပေးမယ့်​"Cartoon Photo v1.14"ဆိုတဲ့application​လေးတစ်​ခု
-Apk file size2.2MBရှိပြီး
-Android OS Version4.0နှင့်​အထက်​ရှိတဲ့
Posted by ကိုဇော် သွင် No comments :
သုခမြို့တော် - မြသန်းတင့်
ရေးသားသူ---- - မြသန်းတင့်
မြစိမ်းပြာကမာရွတ် - နုနုရည်(အင်းဝ)
PC က Hardisk တွေကို Partation ခွဲနည်း.PDf
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော် Latop
၀ယ်ပြီးကတည်းက Hardisk ပြသနာ
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာမှာ Partation ခွဲနည်းကို
ဒီမှာ တင်ပေးလို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့်
အတွက် မတင်ပေးတော့ပါဘူး PDF ပဲ
PC Hardisk တွေကို Partation ခွဲနည်း
Download : (688) KB
Posted by Min Oaker No comments :
Internet Download Manager 7.1 Full Virsion (Leastest)
Virsion လေးပါ ..တောင်းဆိုထားကြလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ
ဒီ Virsion အသစ်မှာ
လည်းရှိပါတယ်။။ တစ်ဆင့်ခံဆိုဒ်တွေဆို သိသာ
ပါတယ် .. ကဲ ဒေါင်းလိုက်ကြပါအုံး
Download IDM 7.1 full (30.2) MB
Samsung Galaxy Note4SM-N910K v-4.4.4 Kitkat (အမြစ်တူးမယ်)?
ဒီနေ့ တော့ ဦးလေးကြီးကိုမေးထားတဲ့ ညီလေးတယောက်အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Samsung Galaxy Note4SM-N910K v-4.4.4အတွက်Rootလုပ်နည်းလေးဖော်ပြပေးပါမယ်
Samsung Galaxy Note4CF-Auto-Root Package
Odin 3.10 free5Downloads link
only 1 Downloads link
LG G Pro lite (D686) PC Sycn Software: LG PC Suite for Windows and Mac
ဦးအာကာကိုဖုန်းဆက်ပြီး LG G pro lite D686 driverတင်ပေးဖို့ 
ပြောထားတဲ့ ညီရေး ဦးလေးကြီး စက်တိုင်းနဲ့ ကိုက်ညီအောင်တင်ပေးထားပါတယ်
LG PC Suite for Windows XP, Vista, Windows7and 8
driverမသိရင်တောင် သိအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Toolလေးပါ
ဖုန်းအတွက်ပါ Toolလေးရဲ့ apkပါတွဲတင်ပေးထားပါတယ်
LG PC Suite for Mac OS X or above:
အမျိုးအစား: Drivers Software
♪ AVS Video Converter v9.0.1.566 (Full Version) ♫
Video Format ပေါင်းများစွာကို မိမိလိုချင်တဲ့ Format တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ AVS Video Converter လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခြားသော Converter များထက်ပိုကောင်းတဲ့ အချက် ကတော့ မူရင်း Quality ကိုလျော့မသွားစေပဲ Video များကို Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Convert လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ File Type တွေကတော့ MP4, AVI, RM, RMVB, QT, MOV, 3GP, 3G2, FLV, MPEG-1, MPEG-2, DVR-MS, VOB, MKV, ASF, DivX, OGM to MP4, AVI, WMV, 3GP, 3G2, FLV, MPG and SWF တို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ကွန်ပြူတာနဲ့ချိတ်ဆက် အသုံးပြုပြီး Convert လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Device တွေ ကတော့ iPhone, iPad, iPod Touch, Samsung, Android tablets, Sony PSP, Amazon Kindle, smartphones, portable media players, တို့ဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။ တင်ပေးထားတဲ့ ExE File ကို Install လုပ်ပြီးတန်းသုံးရုံပါပဲ။ Full Version အဖြစ် Crack , Patch , Serial Key တွေမလိုပါဘူး။ အသေးစိတ် Feature တွေကိုတော့ အောက်မှာဆက်လက်လေ့လာ နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Version: 9.0.1.566File Size: 60.88 MB
Windows 8.x/Windows7Recommended System Requirements
အမျိုးအစား: Converter , Editing , Video Converter
♪ Android OS တွေအတွက် အသုံးဝင် Tools ပေါင်း 22မျိုးပါဝင်တဲ့ - 3C Toolbox Pro (Android Tuner) v1.2 APK (28-Nov) ♫
Android Phone User တွေအတွက် အသုံးတည့်မယ့် Application လေးတစ်ခု မျှဝေပေးလိုက်ပါ တယ်ဗျာ။ Android Tuner ဆိုတဲ့ Application လေးထဲမှာ အသုံးဝင်တဲ့ Tools ပေါင်း 22 မျိုးတိတိ ပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ စွယ်စုံသုံးလို့ရမယ့် All In One Application လေးဆိုလည်းမမှားပါဘူးဗျာ။ အခု 3C Toolbox Pro လေးကိုသာ Install လုပ်ထားပြီး ပုံမှန် Run ပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာ အမြဲတမ်းပေါ့ပါးသွက်လက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Android ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ run နေတဲ့ programs တွေကို ပိတ်ပေးခြင်း၊ ဖုန်းကို backup/restore လုပ်ပေးခြင်း၊ System app များကို ဖျက်ထုတ်နိုင်ခြင်း၊ Android ဖုန်းကို Reboot, Recovery , Bootloader, shudtdown လုပ်နိုင်ခြင်း အစရှိတာတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ APN, BT discovery, GPS & WiFi Localization ကိုဒီဆော့ဝဲလ်နဲ့ အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Android version 2.1 နှင့်အထက်မှာအ သုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Root ဖောက်ထားပြီးသားဖုန်းများမှာသာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အသုံးဝင် tools များစွာပါဝင်တဲ့ အတွက် Android ဖုန်းရှိသူတိုင်း အသုံးပြု သင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
1x1 and 2x1 text widgets
1x1 and 4x1 toggle widgets***
Battery saver (cpu, switch off wifi, bt...)***
ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီးစစ်တိုက်ဂိမ်းလေး Call of Duty®: Heroes v1.1.0 Apk
ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီးစစ်တိုက်ဂိမ်းလေး Call of Duty®: Heroes war battle အက်ရှင်ဂိမ်းကောင်းလေးပါဗျာ
war battle တိုက်ခိုက်ရတာဆိုတော့ အကြိုက်တူမှာပါအောက်မှာဒေါင်းပါ (ပုသိမ်အိုင်တီ)
Call of Duty®: Heroes v1.1.0 Apk | 80 MB | Resumable Links | Requires :Android 2.3.3 and Up |
Command an army of legendary heroes, elite soldiers, and devastating drones straight from the Call of Duty franchise in this 3D combat strategy game!
Posted by ပုသိမ်နည်းပညာ No comments :
အမျိုးအစား: Android Game
ဖုန်း user တိုင်းအကြိုက်တူတဲ့---MX Player Pro v1.7.33 Apk
ဖုန်း user တိုင်းအကြိုက်တူတဲ့---MX Player Pro v1.7.33 Apk ဗားရှင်းအသစ်ဒီနေ့ထွက်လေးပါဗျာ။
MX Player Pro v1.7.33 Apk |7MB | Resumable Links |
Remove AC3, MLP audio codec due to license issue.
Added RTL subtitle disposition option under Settings > Subtitle for Android 4.2 and later.
Added http user-agent overriding option under Settings > General.- Bug fixes.
Added “Scroll to last played media” option under Settings > List.
Added “Toggle playback with play button” under Settings > Player.
a) MULTI-CORE DECODING – MX Player is the first Android video player that performs multi-core decoding. According to the test results on dual-core devices, it shows up to 70% performance improvement than single-core devices.
b) CPU OPTIMIZATION – Provides highly optimized codecs and Rendering Engines for the processors including ARM® NEON™ and NVIDIA® Tegra™ 2.
c) PINCH ZOOM – Easily zoom in and out by pinching and swiping across screen.
d) SUBTITLE SCROLL – Scroll on subtitle text and playback position will be adjusted to match previous or next subtitle timing.
e) KIDS LOCK – Keep your kids entertained without having to worry about making calls or touching other apps. (plugin required)
f) ANDROID 4.0 – Fully supports Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
– SAMI(.smi/.sami) with ruby tag support.
အမျိုးအစား: Andriod application
Music တွေကိုပိုမိုကောင်းစွာနားဆင်နိုင်တဲ့ Poweramp Music Player (Full) v2.0.10-build-567-uni Apk
Music တွေကိုပိုမိုကောင်းစွာနားဆင်နိုင်တဲ့ Poweramp Music Player (Full) ဗားရှင်း အသစ်လေးပါ အသံ
Poweramp Music Player (Full) v2.0.10-build-567-uni Apk |5MB | Resumable Links | Requires Android:2.1 and up |
Powerful Music Player for Android!!!
fixed widget configuration on Android 2.x
fixed issue with License error #1
fixed issue with welcome dialog
optimizations for large number of albums/folders in Albums/Folders lists and grids
improved image caching for the scrolling buttery in Albums/Folders lists (Android 4+, 3rd party skins may vary)
Music Folders selection dialog revamp/optimization for large storages
filter support for View As Grid
fixed crash for large number of albums with images for some CM variants
Poweramp doesn’t create .pamp files (folder thumbnails) anymore
better support for skins on Lollipop (skin updates may be required)
fixed/polished things for Lollipop in various areas
skinned dialogs now order buttons according to default platform order
few other fixes and small improvements
▼ 2014 ( 7287 )
▼ November ( 712 )
Huawei G740ကိုလွယ်လွယ်ကူကူRootဖောက်ကြမယ်(only apk)...
Internet Download Manager 7.1 Full Virsion (Least...
Samsung Galaxy Note4SM-N910K v-4.4.4 Kitkat (အမြ...
LG G Pro lite (D686) PC Sycn Software: LG PC Suite...
♪ Android OS တွေအတွက် အသုံးဝင် Tools ပေါင်း 22မျို...
ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီးစစ်တိုက်ဂိမ်းလေး Call of Duty®: Hero...
ဖုန်း user တိုင်းအကြိုက်တူတဲ့---MX Player Pro v1.7...
Music တွေကိုပိုမိုကောင်းစွာနားဆင်နိုင်တဲ့ Poweramp...
အသုံးဝင်တဲ့ Root Explorer v3.3.1 Apk (ဒီနေ့ထွက်)
♪ ဖုန်းထဲမှ Data များကို Backup လုပ်ဖို့အသင့်တော်ဆ...
5 Star ကို ကျော်တဲ့ Photo Grid - Collage Maker 4.7...
Virus ရန်မှ %100% ကာကွယ်ပေးပြီး သင့်ဖုန်းမှာ အမြန်...
အပြောင်းအလဲများစွာနဲ့ Facebook ဟာသဘုရင်-My Talking...
TaiG Jailbreak Tool ကိုအသုံးပြုပြီး iOS 8.1.1 ကို ...
C8815 Custom rom and Network unlock Tool 3G မတက်သူ...
computerသုံးသူများ virusကိုက်နေလျှင်ဖြစ်တတ်တဲ့er...
သင်္ဘောသားသုံးယောက် ဟာသဝတ္ထုတိုများ ..... သော်တာဆွေ
သင်္ချာပညာ ငါဆရာ - မောင်ဒီ
Samsung SM-G313HZ (Galaxy V)ကိုRootလုပ်နည်း
Huawei G6-U10, G6-U00 (နှစ်မျိုးနှစ်စားကို Rootလုပ...
Huawei C8816D ကိုRootအလွယ်လုပ်နည်း
Windows XP ချစ်ပရိတ်သတ်များအတွက် မိမိကွန်ပျူတာလေး ...
Celebrate 10 year Firefox ဟာ ဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ်-Firefo...
နည်းပညာစာအုပ်၁၀၀ကျော်ကို စုစည်းမှု (free ebook)
♪ ဇတ်ရှိန်လုံးဝမကျပဲသေပြေးရှင်ပြေးကစားရမယ့်ဂိမ်း -...
♪ အသုံးဝင် Tools ပေါင်း 14 မျိူးပါဝင်တဲ့ - Glary U...
ဒီဇိုင်းအလန်းလေး Multi GO Launcher Live Theme
သင့်စိတ်ကူးထဲက Pro အဆင့်ကို အပျင်းပြေကလစ်ရင်းကနေြ...
♪ ဦးနှောက်သုံးပြီးကစားရမယ့်ဂိမ်း - Cut the Rope: ...
Youtube ပေါ်က Video တွေကို ဒေါင်းလော့ရန်အတွက် အကောင...
ဖုန်းသမားတွေအတွက် servicer မှာ နာမည်ကြီး အသုံးဝင်း...
Window-8 စတိုင်နဲ့ အရမ်းလန်းတဲ့-Taskbar (Premium) ...
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်မှု သိကောင်းစရာမျ...
မကြားရာသည် ရှေ့နေ ရှေ့ရပ် - ဦးကျော်ဇေယျ
ကွန်ပြုတာမှ Viber ကို မြန်မာလို ကောင်းစွာ မြင်နိုင...
ဗာရှင်း -2.0 မှ 4.4ထိ Play Storeထည့်သွင်းနည်း
♪ ဖုန်းပေါ်မှာဇယ်ခုံတောက်နိုင်ပြီဗျာ - Carrom 3D v1...
Mobile ဖုန်းမှာကစားနိုင်မည့် ပထမဆုံး DotA ဂ်ိမ်း "...
Galaxy Note Edge SM-N915S/ K(Korean Variants)ကို r...
facebook pageများကို likeများလာအောင်လုပ်နည်း(only ...
Viber က Public Chat ကို မိတ်ဆက် & Viber Viber 5.1....
Allwinner A23 Tablet firmware Download နဲ့ တင်နည်း...
Handy Toolkit by Kyaw Swar Thwin
♪ SMS Backup & Restore Pro v7.23 Apk ♫
Wondershare Video Editor 4.8.0.5 + Crack
သင့်ကွန်ပျူတာလေး Activate မဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေပါသလာ...
Mojosoft Photo Frame Studio 2.96 DC 20.11.2014 Fi...
♪ Facebook Account တစ်ခုအား အပြီးအပိုင် Delete လုပ...
တစ်ချက်ကလစ်ရုံနဲ့ တစ်ခု သူ့အလိုလိုပြောင်းပေးမယ့် သ...
စမတ်ဖုန်းရှိနေရင် ဒီဆော့ဝဲလည်း သင်နဲ့အတူရှိနေသင့်တ...
Video Booth Pro 2.6.3.6 Multilingual Final + Crack...
♪ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဂြိုဟ်တုနှင့် ဆက်နွှယ်သော ဝန်ဆောင်...
★★ Mojosoft Photo Frame Studio 2.96 DC 20.11.2014 ...
♪ Android Phone မှာ ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုလေးရေးသားနိုင်...
♪ LG က ကီးဘုတ် ပါရှိတဲ့ တက်ဘလက်ကို တီထွင်နေ ♫
♪ Lumia 535 ကို အိန္ဒိယမှာ ဒေါ်လာ ၁၅၀ ဖြင့်ရောင်းချ ...
မိမိဖုန်းကို သဘာဝကျကျ 3D live Wallpaper အလန်းလေး-A...
★★ EZ CD Audio Converter 2.3.4.1 + Crack ★★
★★ AnvSoft Photo Slideshow Maker Platinum 5.58 + C...
နာမည်ကြီးပြိုင်ကားဂိမ်းဖြစ်တဲ့ Race Team Manager M...
♪ ပေါ့ပါးမြန်ဆန်မှုရှိတဲ့ Web Browser - Maxthom Bro...
ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကို သူများမလစ်စေချင်ဘူးဆိုရင် ဒီကောင...
ကဗျာအလုပ်ရုံကလေး - အောင်ဝေး
TechSpace နည်းပညာဂျာနယ်(Vol-3, Issue-34)
Honor 3C china and international brand များအသုံးပြ...
G730-C00 ဖုန်းများအတွက် IMEI error ကို ဖြေရှင်းပေး...